Edere site Tranquillus | Oct 26, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Na ndụ ọkachamara gị, ị ga-edekarị akwụkwọ a mail nke esemokwu. Enwere ike ịgwa onye ọrụ ibe, onye mmekọ ma ọ bụ onye na-ebubata ihe a. N'agbanyeghị ebumnobi gị, ị ga-eburu n'uche ụfọdụ ihe achọrọ ka ndị na-akpakọrịta gị were were kpọrọ ihe. Ya mere, ịmụta ịde ụdị ozi a dị mkpa. Nke a bụ otu ị ga-esi mee nke ọma na email mkpesa gị.
Mgbe ị na-ede email mkpesa, ọ dị mkpa ịgbalịsi ike maka eziokwu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a ghaghị iwepụta ihe ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi ka onye na-agụ wee nwee ike ịghọta ihe gbara ya gburugburu ngwa ngwa.
Yabụ, zere nkọwa na ahịrịokwu na-enweghị isi kama kọwaa ihe ndị dị mkpa dịka eziokwu na ụbọchị. Ọ bụ n'ezie na ihe ndị a ka onye nnata ga-enwe ike ịghọta ebumnuche email gị. Ị ga-enyerịrị ozi doro anya, nke ziri ezi na akara ụbọchị.
gosi ihe gbara ya gburugburu wee gosi isiokwu email ahụ
Gaa ozugbo na isi okwu mgbe ị na-ede email mkpesa. Ịchọghị okwu dị ka "Ana m edegara gị email a" n'ihi na ihe ndị a bụ ihe doro anya na-adịghị mkpa ka a kọwapụta ya.
Mgbe i kwusịrị nke ọma ihe ndị kpatara mkpesa gị na-echefughị ​​ụbọchị ahụ. Ọ nwere ike ịbụ nzukọ, nzukọ ọmụmụ, mgbanwe email, mkpesa, ịzụrụ akụrụngwa, nnata akwụkwọ ọnụahịa, wdg.
Gaa n'ihu, na-ekwupụta atụmanya gị n'ụzọ doro anya dị ka o kwere mee.
Echiche bụ na onye nnata nwere ike ịghọta ngwa ngwa ebumnuche nke email gị yana ihe ịchọrọ na ya.
GỤỌ Mee atụmatụ ide ihe nke ọma
Lekwasị anya na uche ziri ezi n'okwu gị
Ide ozi-e mkpesa chọrọ nlebara anya na ụdị nkenke. N'ezie, ebe ọ bụ na nke a bụ ọnọdụ pụrụ iche, ị ghaghị ilekwasị anya na eziokwu na atụmanya gị. Iji mee nke a, jiri obere ahịrịokwu ndị na-achịkọta isi ihe ịma aka gị na nke e dere n'asụsụ dị mma kwa ụbọchị.
Ọzọkwa, jide n'aka na ị ga-eji nkebi ahịrịokwu dabara adaba maka mmemme ahụ. "Ekele ekele" na "ekele kacha mma" ka a ga-ezere n'ụdị mgbanwe a.
Jide n'aka na ị ga-abụ ọkachamara mgbe ị na-ede email mkpesa, ọbụlagodi na ị naghị enwe obi ụtọ. Ị ga-eme ike gị niile iji jide onwe gị n'ihi na mmetụta uche adịghị adị n'ezie na ederede ọkachamara.
N’ihi ya, zere ikwu okwu ndị nwere ike ime ka obi dị gị mma n’otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Ọ dị mkpa na email gị ka bụrụ eziokwu.
Tinye ihe akaebe
N'ikpeazụ, iji nwee ihe ịga nke ọma na email mkpesa, ọ dị mkpa itinye ihe akaebe na arụmụka gị. Ị ga-egosirịrị onye nnata na ị nwere ezi arụmụka. Yabụ tinye akwụkwọ ọ bụla ị nwere ike iji dị ka ihe akaebe wee kwupụta ya na ozi-e.
Ihe nzuzo nke email mkpesa edere nke ọma Ọnwa Iri 26, 2021Tranquillus
gara agaMepụta ajụjụ ịre ahịa nke mbụ gị
-esonụOzi ndị ọkachamara: Ụfọdụ iwu maka ụdị ịkpọ oku nkịtị